Ionic, esi sikhokelo sinokufakwa njani ku-Ubuntu 20.04 | Ubunlog
Ionic, esi sikhokelo sinokufakwa njani ku-Ubuntu 20.04
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-Ionic Framework, kunye nendlela yokufaka kwi-Ubuntu 20.04. Esi sikhokelo siza kuvumela abasebenzisi ukuba bazalisekise iiprojekthi kunye nezinye izikhokelo ezinje ngeAngular. Ionic ngumthombo ovulekileyo opheleleyo we-SDK yophuhliso lwesoftware eyenziweyo eyenziwe ngu-Drifty Co's Max Lynch, Ben Sperry, kunye no-Adam Bradley ngo-2013. Inguqulelo yokuqala yakhutshwa ngo-2013 kwaye yakhiwa ngaphezulu kwe-AngularJS kunye ne-Apache Cordova. Nangona kunjalo, uguqulelo lwamva nje lwakhiwe njengeseti yamacandelo ewebhu, ethi ivumela umsebenzisi ukuba akhethe ukwenza Angular, React okanye Vue.js iiprojekthi. Ikwavumela ukusetyenziswa kwezinto ze-Ionic ngaphandle kwesakhelo somsebenzisi.
Ionic ibonelela ngezixhobo kunye neenkonzo zokuphuhlisa i-hybrid desktop, usetyenziso lwewebhu kunye nenkqubela phambili ngokusekwe kuphuhliso lwangoku lwewebhu kunye neetekhnoloji. Ngale nto, ubuchwepheshe bewebhu obufana neCSS, i-HTML5 kunye neSass bunokusetyenziswa. Ngale nkqubo-sikhokelo sinokuphuhlisa usetyenziso kunye nobuchwephesha bewebhu obuhambelana ne-iOS, i-Android okanye iwebhu uqobo. Ikwabonelela ngesixhobo esinamandla se-CLI esiya kuthi sikwazi ngaso ukulawula nokwenza iiprojekthi.
1 Iimpawu ngokubanzi zeIonic
2 Faka i-Ionic kwi-Ubuntu 20.04
3 Isicelo somzekelo
Iimpawu ngokubanzi zeIonic
Esi sikhokelo simahla kunye nomthombo ovulekileyo. Inika ilayibrari yezixhobo zomsebenzisi ezilungiselelwe ukuhamba kunye nezixhobo, ezinokuthi zenze izicelo ezikhawulezayo nezisebenzayo.
Ionic isebenzisa iCordova, kwaye kutshanje ii-plug-ins zokufumana ukufikelela kwimisebenzi yenkqubo yokusebenza njengeGPS, ikhamera, isibane, njl.
Abasebenzisi banokwenza izicelo zabo kwaye bazenzele i-Android, iOS, Windows, desktop (kunye ne-Electron) okanye iiphequluli zanamhlanje.
Ionic kubandakanya ukuhambisa izinto, typography, okanye umxholo osisiseko owandisiweyo.
Xa usebenzisa Izixhobo zewebhu, Ionic ibonelela ngezinto zesiko kunye neendlela zokunxibelelana nazo. Elinye lala macandelo, ukukrola okubonakalayo, kuvumela abasebenzisi ukuba baskrole uluhlu lwamawaka ezinto ngaphandle kwempembelelo yokusebenza. Elinye icandelo, i-Tabs, lenza ujongano lwetabheli oluxhasa indlela yohlobo lwasekhaya kunye nolawulo lobume bembali.
Ukongeza kwi-SDK, Ionic ikwabonelela Abaphuhlisi beenkonzo banokusebenzisa ukwenza amanqakunjengokuhanjiswa kwekhowudi okanye ukwakha okuzenzekelayo.
Kwakhona ibonelela nge IDE yayo eyaziwa ngokuba yiIonic Studio.
Ikwabonelela ujongano lwe Umgca wokuyalela (CLIukwenza iiprojekthi. I-CLI ikwavumela abaphuhlisi ukuba bongeze iiplagi ezongeziweyo zeCordova kunye neephakeji, zenze ukuba izaziso zityhale, zivelise ii-icon zeapp, zibonakalise izikrini, kwaye zenze ii-binaries zemveli.
Faka i-Ionic kwi-Ubuntu 20.04
Ukufakwa kwesi sikhokelo kulula. Ukuqala sifuna ukuvula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kunye hlaziya iinkqubo zethu zenkqubo:
Emva koko siya kuthi faka ezinye iiphakheji eziyimfuneko. Kwisiphelo esinye kuya kufuneka sisebenzise lo myalelo:
sudo apt install curl gnupg2 wget git
Inyathelo elilandelayo liza kuba faka iNodeJS. Lo mzekelo ndiwuvavanyile ngohlobo 14.x. Ukufaka le nguqulo, Siza kuqala ngokudibanisa indawo yokugcina efanelekileyo:
Emva koko sinako instalar NodeJS usebenzisa lo myalelo:
Emva kokufaka iNodeJS, sinako faka icordova ukubaleka:
Okwangoku, sinokudlulela phambili faka i-Ionic usebenzisa npm:
Emva kofakelo, sinako jonga ingxelo efakiweyo ngomyalelo:
Ukwazi ukuba ufakelo lwenziwe ngokuchanekileyo, sinokuqala ngokudala umzekelo omncinci wesicelo. Ukwenza oku, kuya kufuneka kuphela sebenzisa lo myalelo ulandelayo yenza umzekelo:
Xa usebenzisa lo myalelo Kuya kufuneka uchaze ukuba loluphi uhlobo lweprojekthi ofuna ukuyenza. Kulo mzekelo ndikhethe iAngular. Ukongeza, kuya kufuneka unike iprojekthi yakho igama kwaye ukhethe itemplate. Konke oku kuya kufuneka ukhethe kwiscreen esifana noku kulandelayo:
Emva kokusetha, Kuya kwenziwa ifolda enegama esilinike iprojekthi. Fikelela kule folda ukuze ubone ubume beprojekthi.
Ukuze ukwazi jonga iprojekthi, kwisiphelo esinye siya kwenza lo myalelo:
ionic serve --host 0.0.0.0 --port 8000
Ngalo myalelo siya kuvumela nawuphi na umamkeli ukuba afikelele kwizibuko i-8000.
Xa yonke into oyifunayo ilayishiwe, vula isikhangeli sakho sewebhu kwaye uye ku http://localhost:8000 o http://IP-de-tu-servidor:8000 kwaye uza kubona iphepha lomzekelo elisandula ukwenziwa.
Ionic sisakhelo sangoku esivumela ukuba siphuhlise izicelo ezinqamlezayo ngendlela elula kunye nenhle. Inokufumaneka Ulwazi oluthe kratya kunye namaxwebhu malunga nokufakwa kwayo kunye nokusebenza kwayo iwebhusayithi yeprojekthi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Ionic, esi sikhokelo sinokufakwa njani ku-Ubuntu 20.04
I-Linux 5.14-rc7 kufuneka ibe yi-RC yokugqibela ngaphambi kokukhutshwa okuzinzileyo kwiveki ezayo
I-KDE inendlela entsha yokubonisa iifestile ezivuliweyo kunye nolunye uphuculo kwi-Wayland, phakathi kwabanye.